Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Liverpool v Arsenal. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Liverpool v Arsenal.
Liverpool iyo Arsenal ayaa raadinaya guushoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan, ka dib markii Liverpool ay dhibic ka heshay labadii kulan ee ay ciyaareen halka Arsenal ay labo dhibcood iyadana ka heshay labadii kulan ee ay ciyaareen.
Sahin,� Gerrard, Allen�
Downing, Suarez,� Sterling
Cazorla, Arteta, Diaby
Nuri Sahin ayaa la filayaa inuu kulankiisii ugu horeysay u ciyaaro Liverpool ka dib markii Lucas la sheegay inuu dhaawac ku maqnaanayo muddo seddex bilood ah, dhaawac ka soo gaaray bilowgii ciyaartii ay barbaraha 2-2 la galeen kooxda Manchester City.
Daniel Agger ayay u badan tahay inuu ka soo laabanayo ganaaxa isagoo booska kala bixi doona Sebastian Coates, lakiin ciyaaryahanka da’da yar Raheem Sterling ayaa la filayaa inuu mar kale ku bilowdo ka dib markii uu si fiican u ciyaaray kulankii Manchester City.
Dhanka Arsenal Vito Mannone ayaa la filayaa inuu goolka sii waardiyeyn doono iyadoo Wojciech Szczesny iyo Lukas Fabianski ay weli la dhibtoonayaan inay helaan taam ahaansho buuxda.
Dhaawaca mudada dheer ee Bacary Sagna ayaa waxa ay la micno tahay in Carl Jenkinson uu mar kale buuxin doono booska daafaca midig, iyadoo daafaca Faransiiska la filayo inuu tababarka ku soo laabto xilli dhow. Halka daafaca Faransiiska kale Laurent Koscielny uu isna tijaabo caafimaad marayo xilli danbe oo maanta ah.
Jack Wilshere, Emmanuel Frimpong iyo Tomas Rosicky ayaa dhamaan dhaawac waqti dheer ku maqan.
Liverpool ayaa badisay hal kulan oo ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeeyay ee Premier League ee ay iska horyimaadeen Arsenal.
Ciyaaryahanka cusub Joe Allen ayaa 85 boqolkiiba saxay baasaska weerarka ah, halka boqolkiiba boqol uu saxay baasaska dhanka daafaca ee kooxdiisa.
Liverpool ayaa 19 dhibcood kaliya ka heshay 21kii kulan ee ay ciyaareen Premier League sannadkan 2012.
Kaliya� Arsenal (19%) ayaa saxnaansho shuudadka ah ka xun Liverpool Premier League xilli ciyaareedkan (24%).
Waxaa jiray 7 gool oo la dhaliyay daqiiqada 90aad ama wax ka sii badan 7dii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ku dhexmara Liverpool iyo Arsenal.
Liverpool v Arsenal oo ku ciyaaraya Anfield waxa ay iska dhaliyeen goolal otareeto ah oo ka badan kulan kale oo Premier League ah waana afar goolal oo ay iyaga iska dhaliyeen.